Uganda oo Sheegtay In 23 Askari Ay Uga Dhaga Beeleen Dagaalada Al-Shabaab. – Shabakadda Amiirnuur
February 6, 2020 9:24 am by admin Views: 112
Labaatan iyo saddex askari oo ka tirsan Ciidamada Difaaca Dadka Ugandha “UPDF” ayaa dhowkii sano ee lasoo dhaafay ku naafoobay dagaalada iyo qaraxyada ay kala kulmaan Xarakada Al-Shabaab, gaar ahaan waxay ka naafoobeen dhanka maqanka.
Ciidankan oo dhibkaasi la noolaa muddo dheer ayaa dhawaan la siiyay qalabyo maqalka ka saacidi kara oo qiimahoodu dhan yahay 92 milyan oo lacagta Uganda ah.
Inta badan dhagoolayaashan ayaa ku wax yeelloobay qaraxyo waaweyn oo xeryahooda iyo wadooyinkaba lagula beegsaday, sid aay iyaguba sheegeen.
Midkood ayaa u sheegay URN, shuruudo qarsoon, maadaama aanan loo oggolayn inuu la hadlo warbaahinta una sheego inuu la noolaa dhibaatooyinka maqalka afartii sano ee la soo dhaafay.
“Waddankeyga ayaan ku matalayay AMISOM waxaana maalin maalmaha ka mid ah bam ku qarxay xeradeena, taas oo aniga igu kacday, labada dhagood ilaa maanta waa ebar. Wax uun baan akhriyi karaa oo kaliya si aan u fahmo waxa asxaabtayda ay ka wada hadlayaan, ayuu yidhi.
Isagoo intaas ku daray, “Waxaan u dhowaa inaan rajo beel ku dhinto iyadoo taliyayaashaydu ii qaadeen xarunta baxnaaninta iyadoo aan wax rajo ah aan weligey maqlin’ ayuu hadalkiisa sii raaciyay isagoo hadda in yar uun maqlaya maadaama qalab loo keenay.
Kyesirikide, oo ah Agaasimaha Dallada Dhageysiga ee Starkey Hearing Foundation, ayaa sheegay in askartu ay walaac ka muujiyeen sida ay mar walba ku heli karaan batariyada ay ku shaqeeyaan qalabka loo keenay.
Ciidamadan ayaa ku biiraya kumannaan dad weyne ah oo qaba xanuunada dhagaha gaar haanna maqalkoodii waayay, waxaana xusid mudan in hey’addan oo kamid ah kuwa Kaniisadaha ay qalabeysa 527 xubnood oo shacab ah.
Kyesirikidde wuxuu sheegay in hey’addoodu ay diraasad ka sameysay degmooyinka Jinja, Kamuli iyo Iganga, taasoo u xaqiijisay 85% kiisaska dhegaha la’aantu ay ka dhalatay maamul xumo dhanka dowladda ah.